अन्नपूर्ण शुक्रवार, असार ३०, २०७४ 5558 पटक पढिएको
पछिल्लो समय युवा पुस्तामा रुचाइन थालेका नाममध्ये गायिका योजना पुरी सूचीमा पर्छिन् । हालै उनले ल्याएको 'यसपालिको तीजमा' बोलको गीत धेरैले मन पराएका छन् । 'भुँडीवाला केटो', 'घर होइन मन', 'बस्नै नसक्ने', 'ए शिवजी', उनका चर्चित गीत हुन् । आधुनिक, लोक र तीजगीतमा आवाज दिँदै आएकी गायिका पुरी मिडियाकर्मी पनि हुन् । मास कम्युनिकेसनबाट स्नातकोत्तर गरेकी उनी आफ्ना गीतमा आफैं मोडलिङ समेत गर्छिन् । कलाकार बन्न कला, गला र समर्पण चाहिने भन्न रुचाउने गायिका पुरीसँग शिवराज योगीले गरेको संवाद :
आफूलाई को भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ ?
मेरो जन्म मोरङमा भयो, हाल काठमाडौंमा बस्छु ।
मिडियामा कहिलेदेखि लाग्नुभयो ?
संगीत क्षेत्रमा पहिलो गीत रेकर्ड गरेको एक दशक भइसक्यो । मिडियामा काम गर्न थालेको पाँच वर्ष बितेछ । मलाई अहिले गायिका र मिडियाकर्मीको परिचय प्यारो लाग्छ । पढाइ सकियो । मास कम्युनिकेसनमा मास्टर गरेँ । रेडियो, टेलिभिजन हँुदै अहिले ओस नेपालमा फेसबुक लाइभ कार्यक्रम गर्छु।
शिक्षादीक्षा कहाँ भयो ?
ब्याचलरसम्म उर्लाबारी र मास्टर काठमाडौंमै गरेँ ।
पढ्दाताका के बन्छु भन्ने लाग्थ्यो ?
सानो छँदा घरमा नर्स, बैंकर बन्ने दबाब थियो, मलाई चाहिँ गीतसंगीत र मिडियामा सानैदेखि केही गरौं भन्ने रहर थियो ।
कलाकारितामा लाग्ने रहर कसरी जाग्यो ?
रेडियो धेरै सुन्थेँ । रेडियो र साथीहरू शिक्षक नै मेरा सुरुवाती प्रेरणा हुन् ।
किन कलाकारिता नै रोजाइमा पर्‍यो ?
मलाई सानैबाट केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो अनि मसँग के छ भन्दा आवाज नै मेरो हतियार हो भन्ने लाग्यो र आवाजबाटै कलाकारिता गर्न थाले ।
कलाकार हुँदाका दुई फाइदा, दुई बेफाइदा के हुन् जस्तो लाग्छ ?
सबैको माया पाइन्छ खुसी लाग्छ, साना कुराहरू पनि अरूले हामीले जस्तै गर्न खोज्नुहुन्छ जस्तै ड्रेस, बोल्ने स्टायल । बेफाइदा चाहिँ बाहिर हिँड्दा, बोल्दा खाँदा एकदम विचार गर्नुपर्छ । सानोसानो कुराहरू विचार गरिएन भने अरूमा आफूप्रति नकारात्मक असर पर्ने हुँदा एकदम सजग हुनुपर्छ ।
कलाकार बनेर जीविका चलाउन सकिन्छ त ?
कस्तो जीवन जिउने भन्नेमा भर पर्छ । केही औंलामा गन्न सक्ने बाहेक अरूलाई त्यति सजिलो छैन होला तर म चाहिँ मिडिया र म्युजिक भएकोले ठीकैको जीवन बाँचिरहेकी छु ।
नेपालको कलाकारिता कुन बाटोमा हिँडेजस्तो लाग्छ ?
राम्रो नि भइरहेको छ तर व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
आजसम्म कति गीत गाउनुभयो ?
लगभग चार दर्जन गाएकी छु ।
मोडलिङ पनि गर्नुहुन्छ नि, कस्तो छ प्रक्रिया ?
आफ्नै गीतमा गरेकी छु, प्रतिक्रिया राम्रो छ । दर्शकले गायिकाजस्तै मोडेलको रूपमा पनि रुचाएका छन् ।
के चाहिँदो रहेछ मोडेल बन्न ?
अभिनय अनि लुक्स राम्रो हुनुपर्छ ।
सुखदु:खको सम्मि श्रण नै जीवन हो । भगवान्को सुन्दर उपहार पनि हो, यसलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
प्रेममा पर्नुभयो कि भएन ?
नपरेको भन्दा कसैले विश्वास नगर्ला, परेको भनौं भने ऊ नै मेरो लाइफ हो भन्ने चाहिँ भेटेकी छैन, मन हो मनपर्ने, मनपराउने चाहिँ हुनुहुन्छ ।
प्रेम र सेक्सको सम्बन्धबारे के भन्नुहुन्छ ?
प्रेमले जीवन जिउन सजिलो गराउँछ, सेक्स प्रकृतिको नियम हो, सृष्टि चलाउन सेक्स आवश्यक पर्छ ।
कोइरालाले सम्हालिन् प्रदेश प्रमुखको कार्यभार 115
प्राथमिकतामा परेन विद्युतीय गाडी 245
बीपी राजमार्गमा दुर्घटना बढ्यो, सचेतना गराउँदै प्रहरी 52
सहिद परिवार भन्छन्, ‘सपना पूरा हुने भो' 181
रित्ता भाँडा बोकेर आन्दोलनमा उत्रिए महिला 153
१९ हजार निजामती कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने 602